IYunivesithi yaseBethune-Cookman: iGPA, iSAT kunye noMSEBENZI
I-Bethune-Cookman Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Bethune-Cookman University ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Bethune-Cookman Yunivesithi ye-GPA, izikolo ze-SAT kunye ne-ACT. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ulinganisa njani kwiYunivesithi yaseBethune-Cookman?
Ingxoxo yee-Bethune-Cookman University's Admissions Standards:
I-Bethune-Cookman University ivuma ininzi yabenzi bezicelo, kwaye ibha ye-admissions ayikho phezulu. Umsebenzi onzima abafundi besikolo esiphakamileyo baya kuba nethuba elihle lokuvunyelwa. Kwigrafu apha ngasentla, iiblue eziluhlaza kunye neenkcukacha eziluhlaza zimela abafundi abamkelekileyo. Uninzi lwabafundi be-SAT amanqaku (RW + M) angama-750 okanye ngaphezulu, umthamo woMTHETHO we-14 okanye ngaphezulu, kunye nomlinganiselo ophakamileyo wesikolo we "C +" okanye ungcono. Igrafu ibonisa ukuba umfundi oqhelekileyo ootitshala be-Bethune-Cookman unomlinganiselo oqinileyo "B". I-website ye-admissions yeyunivesithi ithi bayabheka abafundi abaneSAT kunye ne-ACT izikolo ezikufutshane nomyinge wesizwe, kodwa zivuma ngokucacileyo abafundi abaneenkalo ngaphantsi kwezo zibakala.
UBethune-Cookman ufuna abafake izicelo ukuba bazalise iminyaka emine yesiNgesi, iminyaka emithathu yeklasi yokulungiselela izibalo, iminyaka emithathu yesayensi (kubandakanywa ubuncinane enye yesayensi ye-laboratory), kunye neminyaka emithathu yentlalo / imbali. Abafaki zicelo kufuneka bafeze ubuncinane ubuncinane be-2.0 kwiindawo nganye zezifundo.
IYunivesithi inenkqubo yokubakholwa ngokubanzi , ngoko ke abantu abamkelekileyo baya kwenza izigqibo ngokusekelwe kumabanga akho kunye namanqaku okuvavanya. Ukucaphula iwebhusayithi ye-B-CU ye-admission website, i-Bethune-Cookman University ifuna ukubhalisa abafundi abanakho amandla kunye nomnqweno wokuqhubela phambili uphuhliso lwabo lwengqondo, ngokomoya nangentlalo. IYunivesithi iphinda iqwalasele umlingani nomntu wesicelo kunye nokukwazi kwakhe nokuzimisela ukuphumeza isicelo sekholeji. " Abafakizicelo, ngakumbi abo banamabanga amanqanaba kunye namanqaku okuvavanya, baya kufuna ukuthatha ixesha babhale izitatimenti zabo, kwaye bafanele bachithe ithuba lokubhala isicatshulwa esikhethekileyo kwisicelo. Ezi ziqendu ezibhaliweyo zixhobo ezifanelekileyo kakhulu kwiyunivesiti ekugwebeni udidi lwakho kunye nokuthanda. Isicelo sicele uluhlu lwemisebenzi yakho yangaphandle , uzuko kunye namava omsebenzi. Ekugqibeleni iyunivesithi ikunika ithuba lokuthumela incwadi yokucebisa evela kumcebisi wakho wesikolo esiphakamileyo.
Ukuze ufunde kabanzi malunga ne-Bethune-Cookman University, i-GPAs eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye ne-ACT izikolo, ezi nqaku zinokukunceda:
Iprofayili ye-Admissions ye-Bethune-Cookman University
Ukuba uthanda iYunivesithi yaseBethune-Cookman, Unokuthi ungawafani nala maKholeji:
IClawk Atlanta University
IYunivesithi ye-A & M
KwiYunivesithi yaseCentral Florida
I-North Carolina i-A & T State University
DePaul GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Iphrofayili yeKholeji yaseLock yasekuqaleni i-80s Alternative
URichard Nixon Iinkcukacha ezifutshane
I-Acid-Base Chemical reaction
Indlela i-Psychology ichaza ngayo kwaye ichaza ukuziphatha okungahambiyo